Khah ziah dai tein ni4chung an um hnga kan timi,achung thli tein biaruahnak an rak tuah an rak tuah hnu ah US leahawi le hna an rak au cang ko hih>>>>>> – Onlinenungak
Khah ziah dai tein ni4chung an um hnga kan timi,achung thli tein biaruahnak an rak tuah an rak tuah hnu ah US leahawi le hna an rak au cang ko hih>>>>>>
Khah ziah dai tein ni4chung an um hnga kan timi,achung thli tein biaruahnak an rak tuah an rak tuah hnu ah US leahawi le hna an rak au cang ko hih. A nai dengmang cang! Nan zumhnak thawnter chin ko ulaw ramchung ummi hawi le kom, u le nau, nu le pa hna. Atanglei ah tha tein rel ulaw an chim ning tein kuat le pehtlaih khawh i zuam cio hna usih.
သင့်တွင် IIMM အတွက် အသုံးဝင်နိုင်သည်ဟု ယူဆရသော သတင်းအချက်အလက်များ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်လျှင်
▪IIMM မှ သင့်ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းကို လက်ခံသည် သို့မဟုတ် လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ လက်ခံလျှင် မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်စေလိုသည်
စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည် ဖြစ်သည်”
IIMM သည် လက်ခံရရှိသော မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကို တုန့်ပြန်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိနိုင်သည်ဟု ယူဆရလျှင်၊ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့လုံခြုံစွာမျှဝေနိုင်သည့်အကြောင်းကို သင့်အားဆက်သွယ်ပြီး ဆွေးနွေးပါလိမ့်မည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေသည့်အခါတွင် သင့်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမှသာ မျှဝေစေလိုပါသည်။